Virtual Kirasi - Nyore Multi Ratidza - Dhijitari Signage Software
Shandisa hunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji kufambisa.
RAMANGWANA ROKUDZIDZA PAMWE CHETE
Fambisa inoshanduka, inofambidzana, uye inowoneka dzidzo chaiyo.
Succinct iri nyore akawanda-skrini ekuratidzira ayo anogadziriswa kuti akwanise chero epamhepo kudzidza zvinodiwa. Shandisa Nyore Multi-Ratidza kukanda mameseji kune evarairidzi masikirini eakafanira chiito uye nekukurumidza kutaurirana. Kanganwa ruzivo kurasika kune dhijitari zvakasarudzika - Nyore Multi-Ratidziro inobvumidza yega yega skrini kuve inoenderana uye kuratidza rakakodzera ruzivo rwakananga kune izvo zvinodiwa nevarairidzi nevadzidzi.
Rekodha, taurirana, uye ongorora mune chaiyo-nguva. Regedza yako chaiyo yekirasi uye uve mudiwa mune indasitiri hunyanzvi! Kurukurai nechikwata chedu nezve maitiro aungaita Nyore Multi-Ratidziro kuti ienderane neyako chaiyo kirasi zvido!
Dhawunorodha Virtual Kirasi BhurochaWana Instant Access
ANOGONESESA, ANOGADZIRIRA, uye ANOGONESESA
Vafambisi uye vadzidzi vanobatsirwa nekushandisa inotungamira-kumucheto tekinoroji. Shandisa Easy Muti-Ratidza kuti utumire zviri nyore ruzivo, gamuchira chaiyo-nguva mhinduro uye gadzira hurukuro dzinoitisa.
MIKANA INOPEDZISIRA YOKUGADZIRIRA
Gadzira iyo yakawanda-skrini kuratidza iri yega kune izvo zvido zveYAKO chaiyo kirasi! Isu tinokwanisa kukudziridza kuratidzwa kunoitirwa zvakasiyana kune zvido zvemumwe mutengi.
Iwe haufanire kunge uri tech guru kuti umuke uye umhanye neEasy Multi-Ratidza. Yedu iri nyore kushandisa interface inotungamidza vashandisi kuburikidza nhanho-nhanho matanho, vachikubvunza iwe yese chaiyo mibvunzo munzira.
digital kirasi mhinduro nesu zviri nyore.
Dhawunirodha yedu Virtual Makirasi Ruzivo Rongedza! >